China 500ml Igqabi Shine Chitha Uthuli Susa Yenza Amagqabi Amagqabi abengezelayo Isitshizi Kubavelisi bezityalo kunye nababoneleli | PENGWEI
500ml Leaf Shine Spray Uthuli Susa Yenza Amagqabi Amenyezelayo Isitshizi Kwizityalo
1. ezingenabungozi, iziqholo ezintsha
2.esetyenziselwa amagqabi abengezelayo, susa uthuli kuwo
I-4.umgangatho ophezulu, ixabiso langoku
Yintoni igqabi elikhazimlayo, ukusuka kwigama lalo, siyakwazi ukuba lingenza igqabi likhanye okanye liqaqambe. I-Leafshine inceda ukugcina imibala eqaqambileyo yamagqabi esityalo sakho kunye naleyo yamagqabi akho esikiweyo. Ukunika inkangeleko yeglosi yendalo iyenza ibonakale intsha kwaye iphila kakhulu. Le mifanekiso ingezantsi ibonisa indlela olusebenza ngayo ukukhanya kwamagqabi.
Into igqabi likhazimle
Ubungakanani H:190mm, D:65mm
Umbala Iitoti eziluhlaza
Ubunzima beMichiza 300g
Ukupakisha ubukhulu 37x 28x17.2 cm/ctn
Ukupakisha Iinkcukacha I-12 iipcs kwibhokisi enye emdaka / ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso
Okunye OEM yamkelwe.
ukukhanya kwamagqabiyenza amagqabi abonakale esempilweni ngokwendalo kwaye engenamafutha, kungoko umphezulu uhlala ucocekile ixesha elide xa kuthelekiswa nokubengezela kwegqabi elishiya intsalela enamafutha. Inevumba elimnandi, lendalo kwaye kulula ukuyisebenzisa ngenxa yomlomo wayo wokutshiza. Ifanelekile kwizinto ezininzi zendalo okanyeizityalo zokwenziwangaphandle kwezo zinamagqabi aethe-ethe okanye anoboya, i-succulents kunye neeferns. Akufunekanga itshizwe kwiintyatyambo kunye namathupha.
Ekubeni ukukhanya kweqabunga kumalunga nokunciphisa ixesha kunye nomzamo, vele utshize imali encinci kumagqabi ezityalo zakho zokwenyani kunye neplastiki, kwaye iya kubenza bakhanye ngokukhawuleza. Qinisekisa ukuba uvuthulula isitshizi ngamandla phambi kokusetyenziswa kwaye utshize malunga ne-30cm. Akukho mfuneko yokuba wosule ngelaphu kuba yoma ngokukhawuleza. Ngokwenyani, yenza ukukhathalela izityalo zangaphakathi kunye nezityalo zeplastiki lula kwindlela yakho yokuphila ekhawulezayo. Tshiza kabini ngenyanga ukugcina idyasi ekhazimlayo ecocekileyo.
Gcoba kakuhle phambi kokusetyenziswa, fafaza kumgama omalunga ne-15-20 cm ukusuka egqabi; Ukuba amagqabi agqunywe luthuli, amabala amanzi, amabala e-calcium, njl. Emva kokutshiza kunokusulwa ngokulula ngelaphu, igqabi lisaqaqambile.
Ngaphambili: 200ml itheko fiesta de Espuma ikhephu isitshizi for Holi carnival umbhiyozo
Okulandelayo: Party Favors Santa Snow Spray Christmas Artificial 9 oz Can For Christmas Tree Decoration
igqabi shine spray
yenza igqabi libengezela